Semalt - Amandla Wokukhuthaza we-SEO
ISemalt namuhla, iyikhambi elifanelekile lokukhuthaza amasayithi enjini yokusesha yakwaGoogle. Izinsizakalo zethu zifaka okungaphezu nje kokukhiqizwa kwe-SEO ngamathuluzi nezindlela ezaziwayo, sithuthukise iqoqo lezindlela ezingakaze zibonwe ngaphambili zokusebenzisa ngempumelelo noma iyiphi iphrojekthi yezentengiso. Ngamanye amagama, uSemalt uyinhlangano yokuthengisa yedijithali enamashumi eminyaka yesipiliyoni ekuphakanyisweni kwe-SEO.
Izinsizakalo zethu zazisetshenziswa ngabanikazi beziza ezingaphezu kwesigidi. Le nkampani isebenzisa iqembu elikhulu lochwepheshe, bethula amakhono ahlukahlukene: Ochwepheshe be-SEO, ochwepheshe be-IT, abaphathi bezentengiso, abaqambi bewebhu, ababhali bamakhophi, izazi zezilimi, ngisho nama-masters wokugqwayiza. Kuyacaca ukuthi yonke into imbi kakhulu, ngakho-ke, ukusebenza kwebhizinisi lakho kuncike ngqo ekubambisaneni neSemalt.
Ukuqonda imigomo yensizakalo yethu, kufanele ube nomqondo oyisisekelo wezakhi ze-SEO nokuthi zisebenza kanjani. Ake sibheke amaphuzu avelele. Ukusebenziseka Kwenjini Yosesho iqoqo lezinyathelo zokuthuthukisa isikhundla sewebhusayithi enjini yokusesha ngamagama angukhiye. Inhloso yokuqala yokwenyusa i-SEO ukuheha abathengi esizeni kusuka ezinjini zokucinga. Umsebenzi wokuqala wokunyusa usesho ukukhipha okuqukethwe kwekhwalithi ukwenza iwebhusayithi ifinyelele ezikhundleni eziphezulu enjini yokucinga.
Ukusebenziseka kwe-SEO kugxile ekwandiseni ithrafikhi yesayithi, okungukuthi, ukukhulisa inani labantu abavakashela iwebhusayithi ngeyunithi yesikhathi. Indawo yesayithi enjini yokucinga kwizicelo ezithile ezibalulekile nenani lethrafikhi limele ukubonakala kwesiza. Izinjini zokucinga zisebenza nenani elikhulu lamapharamitha. Okwamanje, ukwenziwa kahle kwezinjini zokucinga kwenziwa ngezinto zangaphakathi nangaphandle.
Izici zezikhundla zangaphakathi zisebenza ngqo kuwebhusayithi yomnikazi. Ukunyusa, kuleli cala, kusho ukuthuthukisa izici zobuchwepheshe zomthombo, ukudweba isakhiwo esinengqondo, ukubeka izixhumanisi zangaphakathi, ukulungiselela okuqukethwe okuhle nekhwalithi.
Izici zesikhundla zangaphandle ukukhushulwa kwesiza ngokusebenzisa ezinye izinsiza. Isinyathelo esikhulu ukuthola izixhumanisi ezivela ngaphandle ezizoholela kumakhasi akho wewebhu.
Izici zesikhundla zangaphandle ukukhushulwa kwesiza ngokusebenzisa ezinye izinsiza. Isinyathelo sokuqala ukuthola izixhumanisi ezivela ngaphandle okuzoholela kumakhasi akho wewebhu. Umsebenzi we-Semalt uwukubheka zonke izinto futhi uthole isethi yezenzo ezidingekayo ngamathuluzi akhethekile. Ngaphezu kwalokho, ubunzima balezi zenzo buzoholela indawo kwizikhundla eziphezulu. Abafuna ukuphumelela ebhizinisini abahlali benokuqonda okwanele kwe-SEO. Isixazululo esifanelekile sazo kungaba ukusebenzisa ubuchwepheshe beSemalt, ukusebenza ngempumelelo kwayo okuqinisekiswa yimiphumela ebonakalayo.
Lokho uSemalt akwenzayo
Izindawo ezisemqoka ngokukhethekile kwethu zifaka:
ividiyo yokuphromotha yebhizinisi lakho;
Ukuthuthukisa amasayithi, uSemalt udale izindlela ezihlukile zokubona imiphumela ngaphambi kokutshala imali ebhizinisini. Isipiliyoni esikhulu embonini ye-SEO nolwazi lokumaketha kuvumela inkampani ukuthi ibe ngumqambi wezixazululo zamasu we-SEO, njenge-AutoSEO, i-FullSEO. Hlola izinzuzo zale mikhankaso.
Ukufingqa amanani alo mkhankaso singagqamisa izinzuzo eziphambili ezingatholakala kuzo:
ukwakha izinkomba kumawebhusayithi ahlobene ne-niche;
Inqubo ye- AutoSEO yenziwa kanjena: Uma sesibhalisiwe, umhlaziyi wesiza uzohlinzeka ngombiko omfushane ngesakhiwo sewebhusayithi ngokuya ngamazinga we-SEO. Lolu lwazi, luzosiza ukuthuthukisa isikhundla sakho ku-Google. Umphathi wakho, kanye nomeluleki we-SEO, uzokwenza ukubukeza okuphelele kwewebhusayithi yakho futhi enze uhlu lokuhlola lwamaphutha okufanele alungiswe. Unjiniyela we-SEO uqoka amagama afanele ukuze asheshise ukugcwala kwewebhusayithi.
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe buhlala bufaka izixhumanisi ze-inthanethi ngokuqukethwe okuhlobene nezinsizakusebenza ezahlukene ze-intanethi. Imiphumela emihle iyatholakala ngokuhlanganisa zonke izixhumanisi kokuqukethwe okukhethekile. ISemalt ineziza ezilinganayo eziphakeme ezingama-70,000 ezihlokweni eziningi ezisatshalaliswa ngokuya ngobudala besizinda. Sihlala siqapha izixhumanisi nezikhundla zazo ezinjini zokusesha. Izigaba zezixhumanisi zifakwe kwisilinganiso esilandelayo:
Amaphesenti angama-40 - izixhumanisi zehange;
Amaphesenti angama-50 - izixhumanisi ezijwayelekile;
Amaphesenti ayi-10 - izixhumanisi zokuhlonza umkhiqizo.
Ngemuva kokuhlinzeka ngokufinyelela kwe-FTP noma i-CMS management paneli, onjiniyela bakwaSemalt benza izinguquko ezicacisiwe, ezazikhonjiswa embikweni wewebhusayithi. Izinguquko eziqediwe kuwebhusayithi yakho ngenxa yokunconywa komhlaziyi wethu kanye nabeluleki be-SEO baqinisekisa umkhankaso okhiqizayo we-AutoSEO. I-Semalt yenza ukuthuthukiswa kwezinga kwansuku zonke okuqukethe amagama angukhiye we-overhyped ukuze uhlale unolwazi ngokuthuthuka komkhankaso we-SEO.
Imenenja yakwaSemalt ihlola njalo inqubo ye-AutoSEO, inikezela umnikazi wesayithi nge-imeyili noma isikrini sangaphakathi sokwazisa. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi intengo yokuphromotha yawo wonke amaphrojekthi yi- $ 99 ngenyanga. Ngesikhathi sokulingwa, umkhankaso we-AutoSEO weprojekthi eyodwa ubiza u- $ 0,99.
I-FullSEO ibonakala njengeqoqo lezinqubo zokwenziwa kwewebhu zangaphakathi nangaphandle ezikhiqiza impumelelo evelele ngesikhathi esifushane. Ochwepheshe bazokwenza kahle kokubili ukusebenza ngaphakathi nangaphandle, amaphutha alungile, futhi babhale imibhalo ngokuya ngezincazelo ze-SEO. Ngenxa yalokho, ibhizinisi lakho online likhula cishe ezinyangeni ezimbalwa. Ngomkhankaso we- FullSEO , isilinganiso semali engenayo yezezimali sizonyuka kakhulu, ngakho-ke ukubuya ekutshaleni imali sekuba ngaphezu kwama-700%.
Ukwethula umkhankaso we-FullSEO kukuvumela ukuthi uthathe isikhundla esiholayo emkhakheni wezimakethe, ukhuphule izimbangi zakho ezide kakhulu. Lolu hlelo lokuthuthukisa iwebhusayithi luzokulethela imiphumela ezuzisayo ngaso leso sikhathi. ISemalt'll ikwenza ubonakale kumakhasimende angaba khona.
Ngemuva kokubhaliswa, uhlelo lwethu lokuhlaziya luzonikeza umbiko omfushane ngesakhiwo sewebhusayithi elandela amazinga we-SEO wobunjiniyela. Futhi, umphathi wakho, ephelezelwa uchwepheshe we-SEO, uzokwenza ukuhlolwa okugcwele kwe-semantic kwesayithi lakho, ukumiswa kwayo, ukunquma umgogodla we-semantic.
Ngenkathi benza irejista yezimbungulu okumele ilungiswe, umakhi we-SEO unquma amagama okhiye wethrafikhi. Isayithi lakho le-inthanethi libekezelela ukulungiswa okuphelele kwangaphakathi mayelana nazo zonke izigaba eziphakanyisiwe ku-FullSEO. Ngemuva kokuthola ukufinyelela kwe-FTP ne-CMS ukuphathwa kwephaneli, abathuthukisi bethu benza izichibiyelo ezibekwe ngamafuphi kwiwebhusayithi yakho, bonga ukufezeka kwenqubo yakho ye-FullSEO.
Ukusebenziseka kwangaphandle: Ochwepheshe bethu be-SEO baqala ukufaka izixhumanisi ezinsizeni ezihlanganisiwe zewebhu, ezilungele okuqukethwe kwesayithi lakho. Izixhumanisi ezifakiwe zixhunyaniswa kokuqukethwe okukhethekile, ngakho-ke, zikusiza ukuba uthole imiphumela ephelele. Le nkampani inenqwaba engenakubalwa yamasayithi abambisene kahle kuwo wonke ama-niches ahlukahlukene, ahlukaniswe ngamabomu ngokuhambisana nobude besizinda sobukhona bakhe neGoogle Trust Rank.
Ukwakhiwa kwesixhumanisi kwenziwa ngokungaguquki ngenxa yesilinganiso:
Amaphesenti ayi-10 - izixhumanisi zokulebula uphawu lwentengiso.
Umqondisi wakho ngamunye ulawula umkhankaso wakho njengengxenye yohlelo, uthuthukisa uhlu lwamagama asemqoka, ukuletha imibiko ethile, ukwazisa ngokukhula komkhankaso we-SEO. Umlawuli uhlala ethintana nawe ubusuku nemini.
Uma kwenzeka umisa ukunyuswa kwe-SEO, wonke ama-backlink azosuswa, futhi i-Google izowakhipha kungobo yomlando idatha ezinyangeni ezimbalwa. Yize ukukala okuzuziwe kuzokwehla ngokulandelana, noma kunjalo, zizophakama kakhulu kunangaphambilini kokwenza i-SEO. Ukuphakanyiswa kwe-SEO kuwebhusayithi ngayinye kufuna indlela yomuntu ngamunye. Intengo ekugcineni izokwabelwa ngemuva kokuthi uchwepheshe we-SEO aphenye isayithi lakho ngokusizwa umphathi weSemalt.
USemalt futhi wenza iWeb Analytics. Kuhlelo lokuhlaziya oluhlelekile oluveza amathuba amasha wokubheka imakethe. Ngempela inika amandla abasebenzisi ukulandelela izikhundla zabancintisana ngokunikeza imininingwane yebhizinisi yokuhlaziya. Ngenkathi ubheka isimo sewebhusayithi, ikwenza ukwazi ukubhala umbono ocacile wesikhundla sakho sebhizinisi emakethe. Lolu lwazi lokuhlaziya lwenza sikwazi ukugcizelela imininingwane ebalulekile emsebenzini wakho olandelayo futhi ugcwalise isayithi lakho ngokuqukethwe okusekwe kumagama angukhiye afanele, izixhumanisi zokuthenga / zokuthengiselana, namagama asemqoka afanele.
ISemalt Analytics ikutshela wonke amaqiniso mayelana nezikhundla zabaqhudelana bakho emakethe. Ukusetshenziswa ngempumelelo kwale datha kukuvumela ukuthi uphumelele ekusetshenzisweni kokucinga, sebenzisa umkhankaso wakho wokuthengisa. Imininingwane etholwe kusuka ekuhlaziyweni kwezezentengiselwano ivula amathuba amasha wezimpahla nezinsizakalo ,okwengeza igama lokuthengisa ezifundeni ezahlukahlukene, icubungula zonke izici zesifunda.
Ukuhlaziywa kungafushaniswa ngokuthi:
Isebenza kanjani iSemalt Analytics
Lapho nje ubhalisa kwiwebhusayithi yethu, uqala inqubo yokuqoqa imininingwane ebucayi futhi uthole umbiko owubukhazikhazi obonisa isikhundla sakho sewebhusayithi kanye nesikhundla sabaqhudelana bakho. Umbiko futhi uhlanganisa izinkomba zokwakhiwa kwewebhusayithi ngokuya ngamazinga we-SEO.
Labo asebevele benayo i-akhawunti bangangeza enye iwebhusayithi kwikhabethe yomuntu siqu, futhi lokho kuzohlaziywa ngokusobala yi-system. Ngenkathi isayithi lisahlaziywa, uhlelo lwethu luhlinzeka ngokuthengisa amagama angukhiye asuselwa kwidatha ethathwe kuhlaziyo. Lawa magama agqamile azothinta ukwanda kokufika kwesiza. Ungangeza noma ususe amanye amagama angukhiye ngokuthanda.
Sihlaziya izinga lewebhusayithi futhi silandelela ukuthuthuka kwaso amahora angama-24 ngosuku. Ngaphezu kwalokho, siqoqa ulwazi mayelana nezimbangi zakho. ISemalt ivuselela ngezikhathi ezithile iwebhusayithi yakho, ngakho-ke ikunikeze isango lokugcina lokuhlola indawo yewebhusayithi online noma nini lapho uthanda. Ungasebenzisa ngendlela efanayo i-Isicelo Programming Interface (API). Lokhu kungcono kakhulu ngoba idatha ivumelanisa ngokuzenzakalelayo, okwenza abasebenzisi bakwazi ukubona imininingwane ethuthukisiwe. Buka idatha yokuhlaziya ebuyekezwa njalo kunoma yimuphi umthombo owukhethayo.
Amanani we-Analytics ngokuya ngesilinganiso esikhethiwe, hlola izigaba zethu zentela ngezansi:
Njengengxenye yohlelo lokukhuthaza i-SEO, inkampani yethu inikezela ngamavidiyo akhethekile wokubandakanya amakhasimende ebhizinisini lakho. Ividiyo echazayo ifaka amaphuzu avelele emisebenzi yemisebenzi yenkampani yakho ekhomba izinzuzo ezinkulu ngokubambisana nawe.
Ochwepheshe beqembu leSemalt balungiselelwe kahle imisebenzi enzima kakhulu. Bonke bangabamba izingxoxo ngezilimi ezahlukahlukene futhi baqhube ukubonisana okuwusizo. Ukuhlolwa kokusebenza kukaSemalt kwethulwa ekubuyekezweni okuningi okuhle kwamakhasimende ethu. Ukusebenzisana nathi, amathuba empumelelo asondele kumaphesenti ayikhulu, ekugcineni, uSemalt uzoba ngumthombo wakho wemali engapheli. Impumelelo yakho ikhombisa ukunqoba kwethu!